[Ankapobeny ] 08 Janoary, 2009 09:52
Tsy lahatra akory ny milahatra
Hoy Nasolo-Valiavo Andriamihaja
Misy tokoa ny tsy mahafaly, maro ny manafintohina, betsaka izay nihoatra ny loha. Tsy lavorary tanteraka, tsy tapitr’ohatra velively, ny fitondran-dRavalomanana. Tokony hanonganam-panjakana anefa ve izany ? Fa angaha tsy misy fomba hafa, ndao atao hoe «demokratika», ankoatra ny rotaka, fitokonana, filaharana an-dalambe ? Inona moa no atao hoe mpanao politika, ary mendrika ny haja sy voninahitra omena izany : mpametraka ny fanontaniana saro-baliana, mpitady ny vaha-olana manahirana, ho tombontsoan’ny tanindrazana.
Raha io mason-tsivana io, firy no mendrika ho mpanao politika eto Madagasikara ? Ny fanaovana politika tsy hoe ampy mihogahoga an-dalambe na mibodo gazety na mibahana haino aman-jery. Inona no tanjona : tombontsoan’ny firenena ve, mahasoa ny besinimaro ve, mendrika ny Tantara ve ? Inona avy no dingana ahafahana miady amin’ny jadona satria asan’ny kamo sady mandrava hefa ny fidinana an-dalambe ?
Fanontaniana tsy maintsy apetraka saingy asa raha ho ahitam-baliny : ny fahafahana maneho hevitra dia isan’ny toko iketrahan’ny demokrasia saingy tombotsoan’ny firenena ve ny fitaomana olona hidina an-dalambe noho ny raharaha «TV VIVA» ? Fantatrareo ve fa efa ela tokoa aho no tsy manaraka haino aman-jery gasy intsony (akoatra ny Alliance FM sy ny RLI) ? Ny antony, tsotra : ny MBS sy ny mpiara-dia aminy tsy manao afa-tsy miaro ny Filohan’ny Repoblika ; ny groupe VIVA tsy manao afa-tsy mandokaloka ny Ben’ny Tanan’Antananarivo. Vahoaka tokam-po ohatra izany, na tamin’ny 1991 na tamin’ny 2002, no mampandatsa ankehitriny izao. Tsy misy mainty sy fotsy izany fotsiny ny fiainana. Tsy misy hadivory sanatria ho hantsana mampisaraka ny andaniny sy ny ankilany. Ny rano natao ho lakanina, ny hady natao ho toharina, ny hevitra natao ho aravona.
Fanontaniana iray hafa : raha nifidy Ben’ny Tanana, tsy ny fota-mandrevo etsy Ankasina, ny fiara mitohana etsy sy eroa na ny fako manamaimbo ny Renivohitra, ve no nantenaina hisy fivoarana fa iza koa no nitady raharaha amin’izay «kianjan’ny demokrasia» ?
Milahatra foana ny Gasy : milahatra vary sy menaka ary savony ; milahatra bus ; milahatra biraom-pifidianana ; milahatra fandoavana faktiora Jirama na Telma ; milahatra taratasy eny amin’ny Firaisana ; milahatra fandraisam-bola na DAB na Trésor na pension eny amin’ny paositra. Tamin’ny 1990, hono, raha nisokatra tany Moskova ny Mcdo dia nilahatra niandry toerana avy hatrany ny olona na dia ny ampitso aza no fisokafana : narahin’ny mpanao gazety tandrefana eso izany hoe notaizain’ny jadona sosialista amin’ny filaharana ny vahoakany.
Iza no ndeha hihevitra fa mampivoatra toetsaina izany filaharana izany ? Filaharana, fisongonan-daharana, fifanosehana : na misy tsipika mazava izao aza mba handaminana ny filaharana, ny Gasy mihitsy no toa tia mitangorongorona sy finaritra mifanitsa-kitro.
Izao indray, antsoina ny vahoaka hivavaka ankalamanjana etsy Ambohijatovo. Avy eo angamba dia ho taomina hilahatra eny amin’ny 13 mey. Filaharana tsy nahitan’ny firenena tombontsoa, na 1972, na 1991, na 2002. Toekarena vao mitraka, mitambotsitra avy hatrany. Filaminana korontanin’ny sain-drotaka. Fahefam-panjakana voazimba., Filaharana mitaky fanozonana, filaharana manantena fahagagana, filaharana mila voatsiary, filaharana mivavaka amin’ny Mesia, filaharana arahin-datsa. Milahara e, milahara foana, aza miala amin’ny maro, ndeha manara-drenirano, sotroy ny ronono an-tavy, hano ny kobaka am-bava : ravinkazo entin-drano, ka indrisy, izay toeran-kitodiana toa tsy hisy.
Mahafinaritra ahy ny lahatsoratra nosoratan'i Vanf io ka tsy aritro raha tsy napetrako teto @ blaogiko. Mino aho fa tsy ho sarotiny izy raha mahita an'izany eto. LOL
Voarara izany ny famorina olona hivavaka ny alahady 11/01/09 izao etsy Ambohijatovo. Raha ny vaovao hitako anikeo t@ gazety. Ny eo anivon'ny CUA anefa dia mitohy ihany ny fikarakarana ny fotoana sy ny sisa ka mety hisy ve ny fifandonana @ izany? Asa eo isika mahita izy? Fa ny tena nanaitra ahy dia izay aho vao naheno t@ ity fitondrana ity oe handrara olona hivavaka eny fa na eny ankalamanjana aza! Tena misy devoly marina tokoa angamba ao ambadika mandrebireby azy ireo hanao toy io! Ny vahoaka no aoka hitsara e.
Andrasana ihany koa izay mety ho fizotrin'ny lanonana eny Mavoloha izay atao rahampitso 9 janoary 2009. Tsy ho any hono ny ben'ny tanana fa aleony manatrika ny asaramanitra izay ataon'ny kaominina etsy @ kianja mitafo ny Mahamasina, lanonana izay tokony natao omaly kanefa dia ninina nahemotra rampitso mba hifanindry tsara @ ny an'ilay lanonana ataon'i dRamose eny Mavoloha!!! Tsy hisy hahita tombotsoa @ izao ady izao mihitsy eo akory ary tsy hisy hivoaka mandresy akory fa samy mitovy saina sy toetra ka tsy mahagaga raha mivaralila ohatran'io. Ny vahoaka ihany no mijinja ny vokany fa iza indray moa.